October 14, 2021 - Online Hartha
သူဋ္ဌေးသား လူငယ်လေးတစ်ယောက်ကို ပဲပြုတ်သည်ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပေးလိုက်တဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာ
October 14, 2021 by Online Hartha
သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၈ရက် ညဦးယံကာလက လအိမ်ဖွဲ့ခြင်း အတိတ်နိမိတ်ကောက်သော်
လအိမ်ဖွဲ့ခြင်း။ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၈ ရက်။ညဦးယံ ကာလ။ နေ့ရက်အရ အိမ်ရှေ့မင်း သို့မဟုတ် ဒုတိယမြောက် မင်းစိုးရာ ဇာ၊အဖွဲ့အစည်း ကောင်းမြတ်တင့်တယ်ခြင်း မုချဖြစ်အံ့။ ကောင်းကင်ဂြိုလ်နေအရ ကြာသပတေးဂြိုလ်နှင့်တိုက်ရိုက်ပတ်သက်၏။ စိုးမိုးနေသော မင်းစိုးရာဇာ ထိခိုက်ပျက်စီးတတ်၏။ အံ့။စနေဂြိုလ်နှင့် ပတ်သက်မှုရှိနေ၏။ စိုက်ခင်းသီးနှံတို့ပျက်စီးတတ်၏။လကို ဂြိုလ်နှစ်လုံးပူးယှဉ်နေ၏။ စစ်မက်ဖြစ်တတ်။စစ်ပွဲပြင်းထန်လာတတ်။နှစ်ထပ်စက်ဝန်းသဏ္ဍန်ရှိ၏။ စစ်ဘက်အကြီးအကဲကြီး၊စစ်ဘက်အကြီးအကဲများ ဒဏ်သင့်အံ့။ထိခိုက်တတ်၏။ သုံးထပ်စက်ဝန်းဟုလည်ယူနိုင်၏။ထိုအကြီးအကဲတို့ အကြီးအကျယ်ထိခိုက်တတ်၏။ ဝါရွှေသောအဆင်းရှိ၏။စစ်မက် ပိုပိုပြင်းထန်လာတတ်။မြောက်ပိုင်းဒေသများ မိုးကြီးလေကြီးတတ်။ စန်းယှဉ်နက္ခတ်အရမူ မထင်မှတ်ဘဲ မိုးများလာတတ်ခြင်း။နေအိမ်ဖွဲ့၊လအိမ်ဖွဲ့သည့် အကြိမ်အရေအတွက်ထူထပ်များပြားလာပါက လက်ရှိမိုးစိုးနေသည့်မင်းစိုးရာဇာအကြီးအကဲတို့ထိခိုက်တတ်၏။အဆိုးဆုံးအထိပင် ဖြစ်သွားတတ်၏။ ကျမ်းအရ ရေးထားတာပါ။ ဆိုလိုရင်းကို ကိုယ့်ဘာသာလည်း စဉ်းစားကြပါ။ ရှေးကျမ်းအဆိုတွေက ရှေးဆန်တဲ့စကားတွေပါနေတာကို နားလည်ပေးကြပါ။ စာကြွင်း။ စစ်ကိုင်းမှာ အခုည လအိမ်ဖွဲ့တာပါ။ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က လှမ်းပို့ပေးတာပါ။ သိပ်လှတာပဲ။ ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ သိပ်ပြီးကြည်နူးသွားမိတယ်။ အပေါ်က … Read more
အငယျဆုံးသမီးလေးကို အိမျပျေါမှနှငျထုတျပွီး နောကျဆုံးမှာတော့
ည၈နာရီကျော်လောက်ကသင်္ကန်းခြုံထားတဲ့ကိုရင်လေးက ချိုစိမ့်နဲ့ပဲနံပြားပါဆယ်ဆွဲပြီး သင်္ချိုင်းကုန်းထဲ ဝင်သွားလို့လိုက်ကြည့်လိုက်သောအခါ
ည၈နာရီကျော်လောက်ကသင်္ကန်းခြုံထားတဲ့ကိုရင်လေးက ချိုစိမ့်နဲ့ပဲနံပြားပါဆယ်ဆွဲပြီး သင်္ချိုင်းကုန်းထဲဝင်သွားလို့လိုက်ကြည့်လိုက်သောအခါ မနေ့ည၈နာရီကျော်ကျော်ဆလောက်ကကျနော်လက်ဖက်ရည်သောက်ဖို့သောက်နေကျဆိုင်ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်… ထိုင်ခုံကမရှိတော့ကိုရင်လေးထိုငိနေတဲ့စားပွဲမှာပဲဝင်ထိုင်လိုက်တယ်စားပွဲထိုးကောင်မလေးကကျနော့်အတွက်… လက်ဖက်ရည်ခွက်ချပေးနေတုန်းကိုရင်လေးကမေးလိုက်တယ်…. ဒကာမလေးးကိုရင်မှာထားတာကြာပီလေမရသေးဘူးးလားတဲ့… ကျနော်လည်းးမနေနိုင်မထိုင်နိုင်မေးလိုက်မိတယ်…ကိုရင်ကဘာမှာထားတာလဲလို့…ချိုစိမ့်နဲ့ပဲနံပြားမှာထားတာ… အဲဒါနဲ့ကျနော်လည်းးပြန်မေးလိုက်တယ်…..ကိုရင်ကဒီအချိန်စားလို့မရဘူးလေဆိုတော့….မဟုတ်ဘူးး အမေ့အတွက်တဲ့…လက်ဖက်ရည်ခွက်ချပေးနေတုန်းကိုရင်လေးကမေးလိုက်တယ်… ဒကာမလေးးကိုရင်မှာထားတာကြာပီလေမရသေးဘူးးလားတဲ့…..ကျနော်လည်းးမနေနိုင်မထိုင်နိုင်မေးလိုက်မိတယ်… ကိုရင်ကဘာမှာထားတာလဲလို့…ချိုစိမ့်နဲ့ပဲနံပြားမှာထားတာ….အဲဒါနဲ့ကျနော်လည်းးပြန်မေးလိုက်တယ်…။ ကိုရင်ကဒီအချိန်စားလို့မရဘူးလေဆိုတော့…. မဟုတ်ဘူးးအမေ့အတွက်တဲ့…..မြို့ရှောင်လမ်းထဲရောက်တော့ ဘယ်ဘက်ကိုချိုးဝင်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့ သင်္ချိုင်းကုန်းထဲဝင်ခိုင်းတယ်ဗျာ….ကျနော်တော်တော်လန့်သွားတယ် ညက၈နာရီကျော်ပီလေ….. သင်္ချီုင်းကုန်းဆိုတာတိတ်ဆိတ်နေတာကြက်သီးတွေတဖြန်းဖြန်းထလာတယ် ဒါပေမယ့်ကျနော်ကြောက်စိတ်ကိုဖယ်ပြီးတော့သင်္ကန်းခြုံထားတဲ့ကိုရင်လည်းပါတယ်ဆိုပီးအားတင်းဝင်လိုက်တယ်… အဲဒီမှာကိုရင်ကဆင်းပီးဓါတ်မီးလေးနဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်ပြီး…..အုပ်ဂူလေးးတစ်လုံးပေါ်တက်ထိုင်ပြီး… အမေအမေကြိုက်တဲ့ချိုစိမ့်ရယ်ပဲနံပြားရယ်….သားလာပို့တာပါသားကိုခွင့်လွှတ်ပါအမေရယ်တဲအမေ မသေခင်တုန်းကမပြုစုခဲ့ရတာတွေ…. သားအခုမှယူကြုံးမရဖြစ်နေပြီအမေရယ်တဲ့ အဲလိုတွေပြောပြီးတော့ကိုရင့်ကအဲ့ဒါကိုရင့်အမေရဲ့အုပ်ဂူလေးပဲတဲ့….မသေခင်တုန်းကလုပ်မကျွေးနိုင်ခဲ့လို့ အခုလာပို့တာပါလို့သူပြောတဲ့စကားနားထောင်းရင်း…. ကျနော်သူ့ကျောင်းထိပြန်လိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်… ကျနော်သံဝေဂတစ်ခုရလိုက်တယ်….. သူတောင်သေသွားတဲ့မိခင်ကိုသင်္ချီုင်းကုန်ထိလိုက်ကျွေးနေသေးတာ… ငါတို့ကအခုအသက်ရှိနေတဲ့မိခင်ကိုပိုတောင်ဂရုတစိုက်ကျွေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့အသိတရားရလိုက်ပီလေ… ကိုယ့်ကိုမွေးပေးတဲ့မိခင်ဆိုတာတစ်သက်လုံးတစ်ယောက်ပဲရှိတာမို့…. အစားထိုးးမရတဲ့ အနန္ဒဂိုဏ်းဝင်ကျေးဇူးရှင်ကိုအသက်ရှင်နေတုန်း…လုပ်ကျွေးသမှုပြုကြရင်းနဲ့ ကျးဇူးးဆပ်ကြရအောင်သူငယ်ချင်းတို့ရေအခုတော့… ကျနော်ရယ်ကိုရင်ရယ်သင်္ချိုင်းကငြိမ်သက်နေတဲ့အုပ်ဂူလေးးရယ်…။ Credit:တောင်ပံနီလူလေး Unicode Version ည၈နာရီကြျောလောကျကသင်ျကနျးခွုံထားတဲ့ကိုရငျလေးက ခြိုစိမျ့နဲ့ပဲနံပွားပါဆယျဆှဲပွီး သင်ျခြိုငျးကုနျးထဲဝငျသှားလို့လိုကျကွညျ့လိုကျသောအခါ မနညေ့၈နာရီကြျောကြျောဆလောကျကကနြျောလကျဖကျရညျသောကျဖို့သောကျနကေဆြိုငျထဲကိုဝငျလိုကျတယျ… ထိုငျခုံကမရှိတော့ကိုရငျလေးထိုငိနတေဲ့စားပှဲမှာပဲဝငျထိုငျလိုကျတယျစားပှဲထိုးကောငျမလေးကကနြေျာ့အတှကျ… လကျဖကျရညျခှကျခပြေးနတေုနျးကိုရငျလေးကမေးလိုကျတယျ…. ဒကာမလေးးကိုရငျမှာထားတာကွာပီလမေရသေးဘူးးလားတဲ့… ကနြျောလညျးးမနနေိုငျမထိုငျနိုငျမေးလိုကျမိတယျ…ကိုရငျကဘာမှာထားတာလဲလို့…ခြိုစိမျ့နဲ့ပဲနံပွားမှာထားတာ… အဲဒါနဲ့ကနြျောလညျးးပွနျမေးလိုကျတယျ…..ကိုရငျကဒီအခြိနျစားလို့မရဘူးလဆေိုတော့….မဟုတျဘူးး အမအေ့တှကျတဲ့…လကျဖကျရညျခှကျခပြေးနတေုနျးကိုရငျလေးကမေးလိုကျတယျ… ဒကာမလေးးကိုရငျမှာထားတာကွာပီလမေရသေးဘူးးလားတဲ့…..ကနြျောလညျးးမနနေိုငျမထိုငျနိုငျမေးလိုကျမိတယျ… ကိုရငျကဘာမှာထားတာလဲလို့…ခြိုစိမျ့နဲ့ပဲနံပွားမှာထားတာ….အဲဒါနဲ့ကနြျောလညျးးပွနျမေးလိုကျတယျ…။ ကိုရငျကဒီအခြိနျစားလို့မရဘူးလဆေိုတော့…. မဟုတျဘူးးအမအေ့တှကျတဲ့…..မွို့ရှောငျလမျးထဲရောကျတော့ ဘယျဘကျကိုခြိုးဝငျခိုငျးတယျပွီးတော့ သင်ျခြိုငျးကုနျးထဲဝငျခိုငျးတယျဗြာ….ကနြျောတျောတျောလနျ့သှားတယျ ညက၈နာရီကြျောပီလေ….. သင်ျခြီုငျးကုနျးဆိုတာတိတျဆိတျနတောကွကျသီးတှတေဖွနျးဖွနျးထလာတယျ … Read more
လက်ဖဝါးမှာ ‘M’ အက္ခရာရှိသူတွေဟာ တမူထူးခြားနေသူတွေဖြစ်တယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖတ်ကြည့်နော်
လက်ဖဝါးမှာ ‘M’ အက္ခရာရှိသူတွေဟာ တမူထူးခြားနေသူတွေဖြစ်တယ်…ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖတ်ကြည့်နော် လက်ဖဝါးမှာ ‘M’ အက္ခရာရှိသူတွေဟာ တမူထူးခြားနေသူတွေဖြစ်တယ်…ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖတ်ကြည့်နော် လက်ဖဝါးမှာ ‘M’ အက္ခရာရှိသူတွေဟာ တမူထူးခြားနေသူတွေဖြစ်တယ် . . .ဘာလို့လဲဆိုတော့ လက်ဖဝါးရှိ လက္ခဏာကောက်ကြောင်းလေးတွေက မိမိဝိသေသလက္ခဏာနဲ့ ကံကြမ္မာကို ဖော်ညွန်းနေတာလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ဖဝါးမှာ M ပုံသဏ္ဍာန် အက္ခရာစလုံးရှိသူတွေဟာ တမူထူးခြားသူလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ထူးထူးခြားခြား အထုံ ပါရမီ ပါသူ၊ ဝမ်းတွင်း အသိရှိသူ၊ နောက်ပြီး ထူးကဲတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။ မိမိချစ်ရသူတစ်ယောက်က လက်ဖဝါးမှာ M အက္ခရာ ရှိပါက အချက်တစ်ချက်ကို သိထားရပါမယ်။ နောက်ပြောင်ခြင်း၊ လိမ်ညာမုသားပြောဆိုခြင်းနဲ့ ကလိမ်ကျခြင်းတွေ လုံးဝ မလုပ်မိဖို့ပါပဲ။ လုပ်မိသွားရင်တော့ သင့်ကို … Read more
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလယ်ဗဟိုချက်မ တည်ရှိရာနေရာ
မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ဗဟို ချက်မတည်ရှိရာ နေရာသည် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ မြစ်သားမြို့နယ်၊ ကူမဲမြို့ မြသုခရွာ အနီးရှိ ပြက္ခရွေတောင်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ ကမ္ဘာ့တည် နေရာပြ စနစ် (GPS) တိုင်းတာချက်အရ မြောက် လတ္တီတွဒ် ၂၁ ဒီဂရီ ၁၂.၆၉၅ မိနစ်၊ အရှေ့ လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၁၄.၇၅၉ မိနစ်တွင် တည်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ဗဟိုချက်မ အ မှတ်အသား ကျောက်တိုင် တစ်ခုကို မြန်မာနိုင်ငံ မြေတိုင်းအဖွဲ့မှ စိုက်ထူထားသည်။ ပြက္ခရွေ့ တောင်ပေါ်ရှိ ပြက္ခရွေစေတီတော် အနီးတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။ ပြက္ခရွေ့ တောင်သည် ၃၇၅ဝ ပေ မြင့်သည်။ တောင်ထိပ်ပေါ်တွင် အနော်ရထာမင်းတည်ထား ကိုးကွယ်ခဲ့သော သမိုင်းဝင် ရှေးဟောင်းစေတီ … Read more
နပွေညျတျောလမျး နပေူထဲလမျးလြှောကျရငျးကားတားနတေဲ့ ကိုရငျလေးကိုတှလေို့ မေးလြှာကျကွညျ့လိုကျသောအခါ
အဝါရောင်ဖြစ်နေတဲ့သွားတွေကို သဘာဝအတိုင်းဖြူလာအောင် ပြုလုပ်နည်း
အဝါရောင်ဖြစ်နေတဲ့ သွားတွေကို သဘာဝ အတိုင်းဖြူလာအောင် ပြုလုပ်နည်း လှပကြည့်ကောင်းတဲ့ အပြုံးလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြတာလူတိုင်းရဲ့ အိမ်မက်ပါဘဲ။ဒါပေမယ့်လည်း သွားတွေဖြူလာဖို့အတွက် သွား ဆရာဝန်တွေဆီသွားဖို့ဆိုတာ လူတိုင်းမတက်နိုင်ကြတဲ့ ကိစ္စပါ။ဒါကြောင့် အိမ်မှာနေရင်း ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ အလွယ်တကူ သွားတွေကိုဖြူအောင်လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်…။ မီးသွေး မီးသွေးကို အသုံးပြုခြင်းဟာဆိုရင် အလွယ်ဆုံးနှင့်ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးသော နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး သဘာဝအတိုင်းသင့်ရဲ့သွားလေးတွေကို ဖြူဖွေးလှပလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။သွားပွတ်တံပေါ်ကို မီးသွေးခဲလေးတွေ ချေချပေးပြီးတော့ အရင်တုန်းက သွားတိုက်သလိုဘဲ တိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နို့မှုန့်နှင့် သွားတိုက်ဆေး နို့မှုန့်က သင့်ရဲ့ သွားတွေကိုပုလဲလုံးလေးတွေလိုဖြူဖွေးလှပစေပြီးတော့ ကျန်းမာသန်စွမ်းစေပါတယ်။ သွားတိုက်တံပေါ်မှာ သွားတိုက်ဆေးထည့်ပါ။ပြီးရင် နို့မှုန့်လေးတွေကို အပေါ်ကနေဖြူးပြီးတော့ သွားတိုက်လိုက်ပါ။ (တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ်ကနေနှစ်ကြိမ်အထိတိုက်နိုင်ပါတယ်) မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနှင့် ရှောက်ရည် မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကို သွားပွတ်တံပေါ်မှာ ဖြူးပါ။ ရှောက်ရည်အစက်အနည်းငယ်ကို ချပြီးတော့ သွားတိုက်လိုက်ပါ။ ဖြူဖွေးတောက်ပတဲ့ သွားလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်စေမှာ … Read more
အတိုက်အခိုက်တွေများနေပြီး ကံတွေ၊လာဘ်တွေ ပိတ်နေရင် အစီအရင် နည်းလမ်းကောင်းလေး
အတိုက်အခိုက်တွေများနေပြီး ကံတွေလာဘ်တွေပိတ်နေရင် ကျောက်ချဉ် ဆနွင်း ရန်တွေကင်း မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျား….. အခုတင်ပေးမည့် အကာအကွယ်လေးဟာ မိမိကိုရန်မူ.. ပြသနာအမျိုးမျိုးရှာပြီး အတိုက်အခိုက်တွေလုပ်နေခြင်းများ…ကံတွေလာဘ်တွေပိတ်နေခြင်းများ… မိတ်ဆွေအဖြစ်မှ ရန်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲနေခြင်းများ…..နေ့စဉ် ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေ မျှတမှု မရှိခြင်း…ငွေမစုမိခြင်း….မထင်မှတ်ပဲငွေထွက်ယိုပေါက်များခြင်း…. ခဏခဏ ပိုက်ဆံပြတ်တာတွေကြုံနေရသူများအောက်ပါ ကျောက်ချဉ် ဆနွင်း အကာကွယ်လေးကိုလုပ်ထားပေးပါ ခင်ဗျား…။ လုပ်မည့်နေ့ အိမ်ခြံဝင်းထဲ အမှိုက်များမရှိစေရပါ။ တနင်္လာနေ့ စ လုပ်ရပါမည်။နံနက်ပိုင်းလုပ်ရပါမည်။ ပထမဦးစွာ ကျောက်ချဉ်တုံးတစ်တုံးကို ကျောက်ပျဉ်မှာ ဆနွင်းမှုန့်နည်းနည်းရောပြီးသွေးယူထားပါ။ ဘုရားသောက်တော်ရေထဲရောပြီး အိမ်ခြံဝင်းတံခါး ပြတင်းပေါက် နေရာအနှံ့အောင်သပြေညွန့်နှင့်ဖြန်းပေးပါ။ အိမ် ခြံအဝင်တံခါး၏ဘေးအစွန်နှစ်ဖက်အောက်တွင် မန်ကျည်းစေ့တစ်စေ့စာရှိတဲ့ကျောက်ချဉ်တုံးတစ်တုံးဆီချထားပေးပါ…။ နောက်ထပ်တစ်တုံး ပိုက်ဆံအိတ် အံဆွဲ မီးခံသေတ္တာနေရာများမှာထည့်ထားပြီးဆောင်ထားပေးပါ ခင်ဗျား ။ ဤအကာအကွယ်နည်းကို လုပ်ထားခြင်းဖြင့် မိတ်ဆွေများ၏ ရန်တွေကင်းရှင်းသွားပြီး လာဘ်တွေပွင့်လာပါလိမ့်မည်…။ ကိုမင်းနိုင်နှင့်တကွသင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာအားလုံး ခြေရင်းဦးခိုက်လျက်… ဆရာတင်ထူး … Read more
(၃)လသားအရှယျ ကလေးတဈယောကျတညျး အိပျစကျနတောကို တှရှေိ့ခဲ့သညျ့ နောကျကှယျက ကွကှေဲစရာဖွဈရပျ
၃လသားအရွယ် ကလေးတစ်ယောက်တည်းရေမြောင်းထဲရှိ ပိုက်လိုင်းတစ်ခုတွင်အိပ်စက်နေတာကို တွေ့ရှိခဲ့သည့် နောက်ကွယ်က ကြေကွဲစရာဖြစ်ရပ် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Lagunaပြည်နယ်တွင် နေထိုင်သော အသက် ၄၀အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးသည် ရေမြောင်းထဲရှိ ပိုက်လိုင်းလုံးထဲတွင် အရုပ်လေးတစ်ရုပ်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရာ အနားသို့ရောက်သွားချိန်မှာတော့ အရုပ်မဟုတ်ပဲ ကလေးလေးတစ်ယောက်သာ ဖြစ်နေကြောင်းကို အံ့အားသင့်ဖွယ် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အမျိုးသားလည်း အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်တွင် လျှောက်ကြည့်ခဲ့သော်လည်း ကလေးမိဘကို မတွေ့ရှိသည့်အတွက် စိုးရိမ်စွာဖြင့် ပွေ့ချီကာ စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် မိခင်ဖြစ်သူ ပြန်လာချိန်တွင် အကြောင်းစုံမေးမြန်းကြည့်ခဲ့ရာ ကိုယ်ပိုင်နေစရာအိမ်မရှိသည့်အပြင် စားဝတ်နေရေးအတွက် လမ်းမပေါ်တွင် ပန်းကုံးလေးတွေ လိုက်ရောင်းရသည့်အတွက် ကလေးတစ်ဖက်နှင့်အဆင်မပြေ၍ တစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆိုခဲ့သည်။ အမျိုးသားလည်း သုံးလအရွယ်သာရှိသေးသည့် ကလေးကို ထိုသို့တစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ခြင်းဖြင့် အလွန် အန္တရာယ်များကာ နောက်မလုပ်ရန်သတိပေးပြီး လိုအပ်သည်များကို ကူညီပေးသွားမည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ Credit Unicode Version … Read more